Inec ekwuola ka ihe ga-esi gaa na ntuliaka 2019 - BBC News Ìgbò
Inec ekwuola ka ihe ga-esi gaa na ntuliaka 2019
18 Ọgọọst 2018
E mere ọkammụta Mahmood Yakubu onyeisi Inec n'ọnwa ọktoba afọ 2015
Onyeisi Inec bụ Mahmoud Yakubu ekwuola na o nweghị ihe ga-eme ụbọchị ehiwere maka ntụliaka 2019 n'agbanyeghị ụkwụ a na-akpụ n'ala n'okwu gbasara ibinye aka na bọjetị maka ya dị n'ụlọomeiwu.
Yakubu kwuru nke a oge ọ na-aza ndị ntaakụkọ ajụjụ ka ọ gachara ọgbakọ ya na onyeisi ọrụ gọọmentị bụ Abba Kyari n'Aso Rock n'Abuja.
INEC ebidola ụsoro iwepu Dino Melaye
Inec adọtịala oge idenye aha maka PVC
"Ekwuola m ya ugboro ugboro, onweghị ọnọdụ ga-eme ka e yigharịa ntuliaka dịka iwu ịzọ ntuliaka siri dị."
O gara n'ihu kwuo na ntuliaka ga-abụ na Febuwarị 16, afọ 2019.
Dịka nke a na-eme, ụlọọrụ ya, wepụtara ọkwa n'Abuja n'ụbọchị Fraide nke kwuru na e hiwere otu pati ịnara akwụkwọ maka ngosi mmasị ịzọ ọchịchị nke Bekee kpọrọ 'nomination form' na etiti nakwa steeti bido n'Ọgọstụ 17 rue 24.
Ụlọọrụ akụkọ NAN kwuru na a madoro ọkwa ahụ n'ụlọọrụ Inec dị n'Abụja.
Onyeisi nkuzi ihe gbasara ịtụ votu bụ Ndidi Okafor, gwara NAN na "ụbọchị ikpeazụ maka pati itinye akwụkwọ maka ngosi mmasị ịzọ ọkwa onyeisiala n'ụlọomeiwu etiti na Disemba 3 nakwa ntuliaka nke steeti, bụ Disemba 17."
Okafor kwukwara na "INEC ga-agba ihe gbasara ndị ga-azọ ọkwa na ntuliaka etiti n'anwụ ụbọchị Ọktoba 25 nakwa nke ndị ga-azọ na ntuliaka steeti na Nọvemba 9."
Okafor gara n'ihu kwuo na Inec ewepụtala ụbọchị Novemba 17 dịka ụbọchị ikpeazụ maka pati iwegharị maọbụ gbanwe aha onye ga-azọrọ ha ọkwa onyeisiala nakwa ndị ụlọomeiwu nakwa ụbọchị mbụ n'ọnwa Disemba maka ndị ga-azọ ọkwa gọvanọ na ndị ụlọomeiwu nke steeti.
'Anyị anaghị akpa nkata megide Ndigbo'
'Kọnji' ebugala nwoke n'akwa ọrịa nwunye ya n'ụlọọgwụ
Gọọmenti ehiwela abalị abụọ maka ezumike n'izu na-abịa
Dimkpa Ndịgbo ụmụnwaanyị na-achọ ka akara dị ọkụ
Inec: Bia were 'PVC' gị
1 Juun 2018
Ụlọọrụ Inec enyela izu abụọ iji mechie ndebanye aha maka PVC
15 Ọgọọst 2018
28 Juun 2018
Etu e si nabata ndị mba Amerịka 37 hụtara na ha si n'agbụrụ Igbo n'Enugwu
14 Juun 2022
NA EME UGBU A Ndị ụkọchukwu emeela ngagharịiwe na Kaduna maka ogbugbu ndị otu ha
Dịka onye nkwado Arsenal, nwaanyị ọbụla agaghị emewali gị obi - Kelechi Arsenal
20 Juun 2022
18 Juun 2022
Etu ndị mba Amerịka 37 si agbụrụ Igbo si mee emume iza aha Igbo n'Enugwu
Ihe mere m ji yiri uwe ụkọchụkwu gaa ụlọikpe n'Anambara- Ọkaiwu Abuchi Goshen
Ndụ m nọ na nsogbu n'ihi na e nwere ike igbu maka iso nwoke ibe m- Nwoke esi Briten tụlata Naijiria
BBC Igbo Townhall: O kwesịrị ka e wepụ atụmatụ 'delegate' na ntuliaka imeụlọ pati - Ned Nwoko, Joe Igbokwe, Ndidi Anike
Etu ndị 'unknown gunmen' siri wakpoo ndị uweojii n'Enugwu na Juun 30,2022
Ihe Simon Ekpa, Rita Edochie, kwuru maka oku MNK kpọrọ ka udo chịa n'Ọwụwa Anyanwụ
Ike Ekweremadu: Ụlọikpe eyigharịala ikpe ya na nwunye ruo July 7 - Ụlọikpe UK
'A chọrọ m ka ala Igbo dere duu'- Nnamdi kanu
Gịnị na-esere Rochas Okorocha, Nana Opiah na Ahmed Lawan?
"Ọ bụghị mụnwa sị ka emeere m achịcha Bekee Biafra, ọ bụ mmadụ nyere m ya - Nwoba Chika